Ndị na-ahụ maka ihe ndị na-ahụ maka ịwa ahụ na ihe mkpuchi - China nke na-eme ihe nkpuchi
Disposable Face Mask ịwa ahụ
Nkọwa ： Njirimara: Mpempe ọgwụ Polymer & Ngwaahịa Ebe Mmalite: Fujian, china Instrument klas: Klas I Ihe: pp na-achaghị acha, akwụkwọ mpịakọta Agba: Ọcha / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ / ọcha / pink Size: 17.5 * 9.5cm BFE: karịa 99% Asambodo : CE nkwakọ ngwaahịa: 50pcs / igbe, 2000pcs / ctn Mmalite: China MOQ: mpempe aha 10000: nkpuchi ihu ihu Akụkụ: Uru anyị: 1. Welcom OEM & ODM. 2. Ọnụahịa ụlọ ọrụ, enweghị ọdịiche ọnụahịa etiti. 3. Enwere ike ịchịkwa ịdị mma nke ọma. 4. Otutu p ...
Igwe Ọkpụkpụ Isi
Kedu ihe ihe nnwale ahụ? Uwe mkpuchi ahụike bụ ngwaọrụ nchekwa nchekwa nwere ọkwa dị oke ala, nyocha dị mma dị oke mkpa, ọ dịkwa mkpa iji nwalee ọtụtụ ihe. Imeri naanị otu ụkpụrụ, ọ dị mkpa iji nwalee ọtụtụ arụmọrụ. N'ihi ịkpa ókè a na-eji eme ihe, ihe a na-ahụkarị maka uwe mkpuchi ahụike bụ ọgwụ ịgba, nsonaazụ sterilaiz, ihe na-egbochi ike, ikewapụ nke ukwuu, oge nrụcha, ire ọkụ, ire ọkụ resis ...
Ihu iru maka Germs
Ngwa: 1. Ngwa: iji rụọ ụlọ, na Ngwuputa ihe 2. Ngwa: ndụ kwa ụbọchị, ihe ọmụmụ ụlọ ọrụ, SPAs, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ebe ọrụ, wdg. 3. Nchebe megide sọks Organic na isi isi Akụkụ: Nkwakọ ngwaahịa & Mbupu: Oge ịkwụ ụgwọ: can nwere ike ịkwụ ụgwọ maka usoro ahụ site na T / T , Ali Trade Assirm, Oge Mbata nke Western Union: 1: Nlele maka ụbọchị 1-3 na-arụ ọrụ 2: Oge buru ibu na-emepụta oge 5-15 ụbọchị, na-adabere n'ọtụtụ
3 Ping ịwa ahụ
Gbanyụọ Mkpochasị Ahụ ihu 3
Nkpuchi Ahụ Ike Ahụ
Uru anyị: 1. Welcom OEM & ODM. 2. Ọnụahịa ụlọ ọrụ, enweghị ọdịiche ọnụahịa etiti. 3. Enwere ike ịchịkwa ịdị mma nke ọma. 4. Ọtụtụ ngwaahịa, ụdị, ụdị, imewe wdg. 5. Ihe ọ bụla ịchọrọ, anyị nwere ike ịchọ gị oge dị mfe. 6. Mara ahịa na ngwaahịa ọ bụla anyị nyere. 7. Ọkachamara ma nwee ahụmihe. 8. "Nzaghachi ngwa ngwa" & ezigbo ọrụ mgbe erere. Ntutu isi: Ajụjụ: Q1: Ọ bụrụ na anyị achọpụtaghị ihe anyị chọrọ na weebụsaịtị gị, gịnị ka anyị kwesịrị ime? A1: Email ...
3 Ply ቀዶ Face
Nkọwa ： Njirimara: Ngwa Polymer Matrials & Ngwaahịa Ebe E Si Malite: Fujian, china Instrument klas: Klas I Ihe: pp na-enweghị akwa, akwụkwọ flter Agba: Ọcha / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ / ọcha / pink Size: 17.5 * 9.5cm BFE: n'elu 99% Asambodo : CE nkwakọ ngwaahịa: 50pcs / igbe, 2000pcs / ctn Mmalite: China MOQ: mpempe aha 10000: nkpuchi ihu ihu Uru Anyị: 1. Welcom OEM & ODM. 2. Ọnụahịa ụlọ ọrụ, enweghị ọdịiche ọnụahịa etiti. 3. Ogo c ...
Ntughari Reusable Reusa
Nkọwa ： Njirimara: Mpempe ọgwụ Polymer & Ngwaahịa Ebe Mmalite: Fujian, china Instrument klas: Klas I Ihe: pp na-achaghị acha, akwụkwọ mpịakọta Agba: Ọcha / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ / ọcha / pink Size: 17.5 * 9.5cm BFE: karịa 99% Asambodo : CE nkwakọ ngwaahịa: 50pcs / igbe, 2000pcs / ctn Mmalite: China MOQ: 10000 iberibe aha ihe: tie-on mask mask Lead Oge: Onu ogugu (Cartons) 1 - 10 11 - 100 101 - 1000> 1000 ...
Ihe mgbochi mmiri na-ezo aka na uwe nchebe ahụike ga - enwe ike igbochi ntopute nke mmiri, ọbara, mmanya na ihe ọ otherụ otherụ ndị ọzọ, na - enwekarị ihe karịrị ogo 4 nke hydrophobicity, iji zere nje virus nke ọbara onye ọrịa, mmiri ahụ na ihe nzuzo ndị ọzọ na - ebute ndị ọrụ ahụike. Ihe mgbochi microbial na-ezo aka na uwe nchebe megide nje na nje, tumadi iji gbochie nnyefe kọntaktị n'etiti ndị ọrụ ahụike na ndị ọrịa na oria. A na-emegharị nyocha ...
Nkọwa ： Njirimara: Ngwa Polymer Matrials & Ngwaahịa Ebe E Si Malite: Fujian, china Instrument klas: Klas I Ihe: pp na-enweghị akwa, akwụkwọ flter Agba: Ọcha / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ / ọcha / pink Size: 17.5 * 9.5cm BFE: n'elu 99% Asambodo : Ihe ngwungwu CE: 50pcs / igbe, 2000pcs / ctn Mmalite: China MOQ: aha otu narị 10000: ihe mkpuchi ihu
Ihe mkpuchi ịwa ahụ 3 Ply
Oge ndu: Otutu (katọn) 1 - 10 11 - 100 101 - 1000> 1000 Est. Oge (ụbọchị) 7 20 30 Ka a kparịta ụka Atụmatụ: Ngwa: 1. Ngwa: ojiji maka Mwube, Ngwuputa Egwuregwu, ingka Ngwakọta 2. Ngwa: ndụ kwa ụbọchị, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, ụlọọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ebe ọrụ, wdg 3. Nchedo nke nsị Organic na isi isi 4. Nchedo nke ụmụ irighiri ihe mepụtara n'oge ịka mma, ihicha, ịsa ahụ na b .. .